Osaziwayo bakuleli abahlanu bamenywe emcimbini waphesheya | News24
LAST UPDATED: 2019-10-23, 06:00
Osaziwayo bakuleli abahlanu bamenywe emcimbini waphesheya
Cape Town – Bahlanu kuphela osaziwayo bakuleli abamenyelwe emcimbini okhethekile oseHollywood.
Lo mcimbi owaziwa nge-African Getdown uzobanjelwa e-Elyx House eHollywood, kanti uzobe wethulwa ngumculi waphesheya othandwa kakhulu umhlaba wonke, uCommon.
Osaziwayo bakuleli abazobe bekhona kubalwa uHeavy-K, u-Anatii noDa LES, kanye nabethuli bezinhlelo uLuthando "Loot Love" Shosha no-Ayanda Thabethe.
Kulo mcimbi kuya abamenyiwe kuphela kanti ubungaza impumelelo yefilimi exuba amasiko nomlando wezwekazi i-Afrika i-Black Panther, njengoba necwecwe layo lenziwe ngokuhlanganyela kwabaculi baseMelika kanye nabase-Afrika.
OLUNYE UDABA:Osaziwayo bafisele umrepha ukululama okusheshayo
“I-Elyx House yindawo ephatha imicimbi yabaculi abahamba phambili emhlabeni wonke jikelele futhi yeseka ubuciko bama-Afrikana ngokubanika ithuba lokuba bagqame kwezikaqedisizungu emhlabeni wonke jikelele,” kusho u-Iris Le Berg, oyiGlobal Marketing Manager enkampanini i-The Absolut Company.
Umhleli mcimbi uDavin Phillips weCelebrity Services Africa yena uthe: “Sifuna ukuletha ubuchule base-Afrika ngenhloso yokwakha amathuba okusebenza ngokubambisana phakathi kwabaculi nophrojusa baseMelika kanye nabase-Afrika, sivule amaxhama okuxhumana phakathi kwala mazwekazi womabili.”